Amazwe AseMerika | Incwadi Yonyaka Ka-2014
ABEMI 970 234 987
ABAVAKALISI 3 943 337
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 4 341 698
Bamema Isibini Ukuba Sihlale Nabo
ELas Vegas, eNevada, isibini esingengomaNgqina sasifuna ukuhlala kwindawo epholileyo, ngenxa yoko sathengisa indlu yaso ukuze sifudukele eDominican Republic. Noko ke, sasimele siyishiye indlu yaso kwiintsuku eziyi-10 ngaphambi kokuba sihambe. AmaNgqina kaYehova angabamelwane athi masize kuhlala nawo. Ngoxa sasilapho esi sibini saya kwiintlanganiso eHolweni yoBukumkani. Samangaliswa saza sanomdla sakuva kuthethwa ngo-1914. Sasisazi ukuba lo nyaka wawubalulekile embalini yehlabathi. Sakufika eDominican Republic, sacela isifundo seBhayibhile kumaNgqina okuqala awasityelelayo. Kwiinyanga eziyi-14 kamva, sazahlulela kuYehova saza sabhaptizwa.
Yile Nto Kanye Wayeyidinga
Abazalwana babeka itafile enoncwadi kumboniso weencwadi owawungo-2012 ePanama City, ePanama. Kweza amantombazana esikolo amabini. Enye yawo yaxelela udade owayeshumayela kuloo tafile ukuba kukho into eyikhathazayo. Yathi utata wayo likhoboka leziyobisi ibe ayikwazi ukumelana nale meko. Lo dade wayibonisa isahluko 23 sencwadi ethi Imibuzo Yabantu Abaselula—Iimpendulo Eziluncedo, Umqulu 2 esinomxholo othi: “Kuthekani Ukuba Umzali Wam Ulikhoboka Leziyobisi Okanye Lotywala?” Le ntombazana yothuka yathi: “Yile nto kanye ndiyidingayo!” La mantombazana amanga lo dade aza aphinda abuya emva kweyure ukuze ambulele kwakhona. Kwiintsuku ezintlanu zalo mboniso, abazalwana bahambisa iincwadi eziyi-1 046, iimagazini eziyi-1 116 kunye neencwadana eziyi-449. Abantu abayi-56 bashiya iiadresi zabo ukuze bandwendwelwe ngamaNgqina.
Washumayela Iminyaka Emine Eyedwa
Ulwimi lweenkobe lukaFredy sisiCabecar, ibe uhlala kummandla oneentaba nosemagqagaleni eCosta Rica. Kwiminyaka emine eyadlulayo, esasebenza kwikomkhulu, iSan José, uFredy wafumana incwadi ethi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? nencwadana ethi, Yintoni UThixo Ayifunayo Kuthi? Umvakalisi owamnika ezi ncwadi wathi makahambe aye kushumayela ebantwini bakubo. Wagoduka ke, wazifundela incwadi ethi, Okufundiswa YiBhayibhile waza wenza utshintsho ebomini bakhe njengokubhalisa umtshato wakhe. Wafundisa amaCabecar inyaniso ngale ndlela ayiqonda ngayo.
UFredy wavula iiklasi aza kufundisa kuzo izifundo zakhe zeBhayibhile. Ezi klasi zazintandathu, efaka kuzo abafundi ngokwendlela ababeyiqonda ngayo iBhayibhile. Wayeqhuba iintlanganiso wade wenza neSikhumbuzo, izimemo zaso awayezenzele zona zazisithi: “AmaNgqina kaYehova ayakumema ukuba ubekho kwiSikhumbuzo sokufa kukaKristu.” Kwaqengqeleka iminyaka emine esenza oku, engakhange adibane nokudibana namaNgqina! Ebudeni beli thuba, wacela uYehova ngomthandazo ukuba athumele amaNgqina ukuze amncede.
ECosta Rica: UFredy, ngoku onguvulindlela othe ngxi, uhamba imigama emide ukuya kuqhuba izifundo zakhe
Kutshanje imithandazo kaFredy iye yaphendulwa. Amanye amaNgqina aye athabatha uhambo olungelula aya apho uFredy ahlala khona ibe ayemangalisiwe koko akubonayo. Athi: “Nangona uFredy engeloNgqina libhaptiziweyo, uphila ngathi lilo!” Emva kweenyanga nje ezintathu waba ngumvakalisi ongabhaptizwanga. Ukuze abhaptizwe, uFredy wehla kwezo ntaba zengingqi yakhe waza waya kwindibano okwesihlandlo sokuqala, ehamba nezifundo zakhe eziyi-19. Sithethanje, kukho amaqela amathathu esiCabecar aye wawaqala, kwiindawo ezisemaphandleni.
Walumela Ukholo Lwakhe Esikolweni
Ngenye imini uAnna, ofunda kwisikolo samabanga aphakamileyo eUnited States, kwafuneka amele ukholo lwakhe phambi kweentanga zakhe ezininzi ezaziyothuka into yokuba akakholelwa kuThixo Oneziqu Ezithathu. UAnna uthi: “Zandingqonga kodwa ndazola kuba ndandingafuni abantu ababukeleyo bathethe kakubi ngamaNgqina kaYehova.” Ngobusuku bangaloo mini wathandazela ukuba nesibindi kuYehova waza waphanda ngemfundiso kaThixo Oneziqu Ezithathu. Ngosuku olulandelayo, uAnna waya neBhayibhile esikolweni. Abantwana afunda nabo bamngqonga ibe uninzi lwabo lwaluhlekisa ngaye. Sekunjalo, enesibindi watyhila izibhalo eziliqela waza waqiqa nabo. Ekugqibeleni abo babemphikisa zange babe nanto yakuthetha. Oyena wayetshotsha phambili kule ngxoxo walikhupha latsola elokuba uyawahlonela amaNgqina kaYehova. Ebudeni bonyaka, waqhubeka ebuza uAnna imibuzo eliqela ngeenkolelo zakhe.
Isihlangu Esaqhawuka Ngexesha Elifanelekileyo
Ngenye intseni yangeCawa, elinye ibhinqa laseBarbados lalisiya ecaweni xa laqhawukelwa sisihlangu. Laya kumzi okufutshane ukuze licele uncedo. Yathi kanti likhaya lomnye udade oliNgqina nentombi yakhe. Ngoxa eli bhinqa lalilungisa isihlangu salo, lo dade wacacisa indlela iziprofeto zeBhayibhile ezizaliseka ngayo. Intombi yalo dade yamema eli bhinqa ukuba liye kwiintlanganiso ngalo ntseni kwiHolo yoBukumkani. Ekubeni lalisele lishiywe lixesha lokuya ecaweni, eli bhinqa lavuma. Ebudeni beentlanganiso lajonga zonke izibhalo kwiBhayibhile yalo iKing James. Lazithanda iintlanganiso. Lathi lalidikwe ngamagubu nabantu abangxolayo ecaweni yalo ibe kudala lafuna ukufunda iBhayibhile kwindawo ezolileyo. Layithatha incwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile ibe lavuma ukuqhutyelwa isifundo. Liya kuzo zonke iintlanganiso yaye liyagqabaza.
Mnye Qha Umntu Onokumyekisa Ukushumayela
Omnye umfana oliNgqina waseGuyana ubalisa athi: “Ndiyakuthanda ukushumayela eklasini, kodwa kukho umfana endifunda naye ongafuniyo ukuba ndishumayele. Ngenye imini, wanditshovela edongeni wathi, ‘Yeka le nto yakho yokushumayela!’ Ndathi kuye, mnye qha umntu onokundiyekisa, nguYehova. Njengoko ndandiqhubeka ndishumayela, lo mfana wasika ubhaka wam. Wandifak’ inqindi ndaza ndakrazuk’ umlebe. Sobabini sabizelwa kwiofisi kaprinsipali, waza wandibuza ukuba ndenze ntoni le nto ndide ndifakw’ inqindi. Ndamchazela ukuba lo mfana undibethe kuba ndishumayela iindaba ezilungileyo. Uprinsipali wandibuza isizathu sokuba ndingakhange ndizilwele. Ndathi kukuba iBhayibhile ithi kumaRoma 12:17, amaKristu ‘makangabuyiseli ububi ngobubi nakubani na.’ Wakukuva oko, uprinsipali wathi ndingahamba, uza kumohlwaya lo mfana undibethileyo.”